Tilmaamaha Shiinaha ee keydinta iyo isticmaalka sheyga Soo-saar iyo Warshad | Teng'an
Sharaxa badeecada budada Aluminium
Magaca badeecada ayaa ah budada aluminium ee biyaha ku saleysan ee loogu talagalay shamiitada hawada ku jirta, taas oo ah wakiilka dhaliya gaaska ee la taaban karo. Doorka la taaban karo ee hawadu waa in kiimiko ahaan looga falceliyo silica quicklime ee qulqulaya si loo sii daayo gaaska loona sameeyo goobooyin wanaagsan iyo kuwo isku mid ah, taasoo ka dhigaysa shubka hawo-mareenka ah inuu leeyahay qaab-dhismeed dedan
Badeecadani waa badeecad koollo ah oo ay ku jiraan wakiil dareere ilaaliya, oo ah qaab qolof qoyan, waxayna ka kooban tahay antioxidants gaar ah iyo aaladda faafisa. Marka la barbardhigo budada aluminium, ma fududa in la abuuro boodh, ma dhaliyo koronto joogto ah, kama cabsanayso qoyaanka, waxay ku habboon tahay miisaanka gacanta, waxayna leedahay shaqeyn xasiloonida cayiman. Waa badeecad cusub oo ammaan ah oo dhaqaale loogu talagalay gaaska.
Si loo hubiyo isticmaalka caadiga ah ee badeecadan, fadlan ogow:
1. Shayga waa in lagu keydiyaa bakhaar qalalan, hawo leh oo qabow leh;
2. Waa in laga soocaa biyaha, aashitada, alkali, waxsoosaarka waxsoosaarka, ilaha kuleylka, ilaha dabka, iwm, si looga hortago inay saameyn ku yeelato saameynteeda gaaska;
3. Badeecada waa in isla markaaba la isticmaalo marka la isticmaalayo, waana in lagu shaabadeeyaa waqtiga la saaray ka dib si looga fogaado isku darka walxaha kale ee ajnabiga ah;
Jinka aluminiumka AAC wuxuu noqdaa midab cad, budada jilicsan, waxsoosaarka jilicsan ee ay soo saaraan dareeraha macdanta, dareeraha biyaha gaarka ah, soosaarayaasha. Haysashada muuqaalka waxqabadka xasilloon, firfircoonaanta sare, ku habboon in la isticmaalo, fududaanta in lagu kala firdhiyo astaamaha biyaha, waxtar u leh ka baaraandegidda wax soo saarka shubka la taaban karo, marka la eego heerkulka hooseeya, iyo qaboojinta, ka dib marka dhalaalka aluminiumka aan la beddelin, waxqabadka ayaa ugu habboon lagu daro iyo wakiilka xumbaynaya ee wax soo saarka silicate, index guud gaadho ama ka badan dalka heerka JC / 407-2000.
Jinka budada ah ee aluminium ayaa loo isticmaalaa warshadaha block AAC. Iyada oo ay ku jiraan dareeraha biyaha iyo nooca koollada, way ku habboon tahay in lagu daro mashiinka sameeya AAC, wuxuu leeyahay wasakh yar deegaanka. Ka sokow, koollada budada aluminium ee ay soo saartay mashiinkeena waxsoosaarka waxay leedahay waxqabad aluminium ah oo sarreeya iyo heerka gaaska timaha dhakhsaha badan, iyo cabirka jajabka ayaa la samayn karaa oo la hagaajin karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
Hore: Ku saabsan qalabka wax soo saarka
Xiga: Saameynta budada aluminium ku leedahay shubka hawada ku jira
koollada aluminium ee aac block light
budada aluminiumka ku jirta